Waxqabadka Saameynta leh Xamaasad ayaa la xiraa Bandhiga Dalxiiska ee Sanadkan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Waxqabadka Saameynta leh Xamaasad ayaa la xiraa Bandhiga Dalxiiska ee Sanadkan
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Waajib ah • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Xidhitaanka Xafladda Dalxiiska Seychelles
Xiritaanka xafladaha loogu talagalay Bandhigga Dalxiiska ee sannadkan, carruurta shaqaalaha ka tirsan Waaxda Dalxiiska ee Seychelles waxay ku biireen kooxda mashruuca Ecosystem Based Adaptation (EBA) hawsha beerista geedka Sabtida, Oktoobar 2, 2021, “Dan Sours” ee Val Den D'or, Baie Lazare.
Carruurta iskuulku waxay muujiyeen xamaasad iyo adkaysi sida, iyagoo ku dhiiraday roobab culus, waxay ka caawiyeen labada kooxood inay abuuraan ilaa 200 nooc oo hooyo ah.
Waaxdu waxay go'aansatay inay ku darto xubnaha bulshada ee dhallinyarada ah si ay qayb uga noqdaan hawlaha saamaynta.
Wax -qabadku wuxuu muujinayaa sida ay uga go'an tahay waaxdu inay qaaddo tallaabooyin dib loogu celinayo qiiqa kaarboonka oo ay sababeen hawlaha dalxiiska.
Xoojinta ballan -qaadkii meesha loo socdo si loola dagaallamo isbeddelka cimilada ardayda iskuulku waxay muujiyeen xamaasad iyo adkaysi sida, iyagoo ku dhiirraday roobab culus, waxay ka caawiyeen labada kooxood inay abuuraan ilaa 200 nooc oo hooyo ah oo ay ku jiraan “lantannyen fey,” “lantannyen milpat,” “lantannyen lat,” “Sandel,” “vakwa,” iyo “lafous” oo ku yaal goobta EBA.
Waxay hoggaaminayeen Seychelles Wasiirka Arrimaha Dibedda iyo Dalxiiska, Sylvestre Radegonde, Xoghayaha Guud ee Dalxiiska, Marwo Sherin Francis, Agaasimaha Guud ee Suuqgeynta Meesha, Marwo Bernadette Willemin, iyo Agaasimaha Guud ee Maamulka iyo Shaqaalaha, Marwo Jenifer Sinon.
Intii ay munaasabaddu socotay, Wasiirka Dalxiiska ayaa sheegay in iyadoo la tixraacayo mowduuca sannadlaha ah ee xafladda, waaxdu ay go’aamisay in lagu daro xubno ka tirsan bulshada si ay qayb uga noqdaan waxqabadka saameynta.
“Carruurtu waa mustaqbalka warshadaha iyo dalkeenna. Waxay noo ahayd muhiim inaan ku darno hawlaha kala duwan ee iidda. Aad baan ugu farxay markaan arkay xamaasadooda inay naga caawiyaan inaan qodno oo aan beerno. Waxay ahayd cashar aad u weyn oo dhiirrigelin u ah dhammaanteen joognay 'Dan Sours,' ”ayuu yidhi.
Iyada oo si toos ah uga hadlaysa idaacadda maxalliga ah “Radyo Sesel,” Mrs. Francis ayaa sheegtay in hawshu ay muujinayso sida ay uga go’an tahay waaxdu in ay qaaddo tallaabooyin ay dib ugu celinayso qiiqa kaarboonka ee ay sababeen hawlaha dalxiiska.
“Deegaankeenu waa mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee meesha aan u soconno. Quruxda jasiiradaheena waxay kuxirantahay falalkayaga si aan u daryeelno. Tani waa sababta aan mar walba ugu darno waxqabad nadiifin ah inta lagu guda jiro Bandhigga Dalxiiskayaga. Urur ahaan waxaa naga go'an inaan ku soconno hadalka oo sannadkan waxaan ku darnay hawsha beerista geedka si aan u xoojinno ballanqaadkeenna ku aaddan dejinta qiiqa kaarboonka iyo ilaalinta nidaamyada deegaankayaga, ”ayay xaqiijisay Marwo Francis.
Dhaqdhaqaaqa beerista geedaha ayaa xiray Festifaalka Dalxiiska ee 2021 oo lagu qabtay halku -dhigga “qaabaynta mustaqbalka.’